सांसदले सोधे-मदन भण्डारी राजमार्ग तराईमा पानी सुकाउने ग्रान्ड डिजाइन त होइन ? – mYKantipur.Com
सांसदले सोधे-मदन भण्डारी राजमार्ग तराईमा पानी सुकाउने ग्रान्ड डिजाइन त होइन ?
२०७५, २० मंसिर बिहीबार २०:२५
मन्त्री गएपनि यातायात सचिवसमक्ष पासवानले गुनासो राखे । ‘महेन्द्र राजमार्ग सँगसँगै जंगल काटेर रेलमार्ग किन बनाउनुपर्ने ? अली दक्षिणबाट लगेको भए वन पनि मासिँदैनथ्यो मधेसको पानीको स्रोत पनि नसुक्ने ग्यारेन्टी हुन्थ्यो’ उनले भने ‘मदनभण्डारी राजमार्ग बनाउँदा तराईमा पर्ने असर’bout अध्ययन भएको छ ?
डोरबहादुर विष्टको ‘अन्तिम प्राज्ञिक योगदान’का साक्षीको वयान
डा. गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न चौतर्फी दबाव